အရှုံးမရှိဘဲ ETH (Ethereum) ကိုဘယ်လို ၀ ယ်မလဲ MyCrypp
ဒါဟာပထမလူတစ် ဦး အတွက်ခက်ခဲသည်
MyCryptoHeroes(MCH) အခြား blockchain ဂိမ်းများသည် ETH ဟုခေါ်သော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုလိုအပ်သည်။
သင့်တွင် Binance သို့မဟုတ် Bitflyer ကဲ့သို့သောလဲလှယ်အကောင့်တစ်ခုရှိပြီးဖြစ်ပါက ETH ကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည်။
သို့သော်၊ အကောင့်မရှိသူများစွာရှိပြီး၎င်းသည် blockchain ဂိမ်းကစားရန်အတွက်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်,GO!WalletPayPal မှတစ်ဆင့်ဂိမ်းကစားရန်အသုံးပြုနိုင်သည့် GO! FIat တွင်အကြွေးဝယ်ကဒ်ဖြင့်သင်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ သို့သော်သင်တိုက်ရိုက် ၀ ယ်လျှင်သော်လည်း ETH သည်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းလိုအပ်သည်။ (၂၀၂၀.၀၃.၀၃.၀၀၀ အထိ ETH ဝယ်ယူမှုထက် ၂၀% ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ ) ဒါကိုမထောက်ခံပါ။
ဥပမာ) 2020.03.03 ၏အဖြစ်MyCryptoHeroes(MCH) GUM နှုန်း
ETH 10,000GUM = 1ETH = 24,625 (JPY) ဖြင့်ဝယ်ယူသောအခါ
10,000GUM = ၃၀,၄၄၉ (JPY)
ဤစာမျက်နှာသည် ETH ကိုဝယ်ယူရန်နှင့် blockchain ဂိမ်းများကိုမည်သို့လွယ်ကူစွာကစားနိုင်မည်ကိုဖော်ပြထားသည်။
အခကြေးငွေ 10% -20% အထိမြင့်မားနိုင်ပါတယ်။
blockchain games တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်အစမှငွေဆုံးရှုံးခြင်းသည်မေးခွန်းထုတ်စရာမဟုတ်ပါ။
ငွေလဲနှုန်းကအသက်သာဆုံးပဲ ဖလှယ်မှုတွင်အခကြေးငွေယူပြီးပြန့်ပွားမှုတစ်ခု (၀ ယ်စျေးနှင့်ရောင်းဈေးမှာကွဲပြားခြားနားသည်) ရှိသည်။
ငွေလဲကောင်တာသည်အလွန်အဆင်ပြေပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်က ၅% မှ ၁၀% ထိခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ၅% နှုန်းနဲ့ဝယ်လို့ရရင်အရမ်းအဆင်ပြေမှာပါ။
ဂျပန်အတွက်အကြံပြုထားသည့် ETH ၀ ယ်နည်း
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်သင်ငွေလဲလှယ်ရေးဌာန၌ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့် ETH ကိုမ ၀ ယ်နိုင်ပါ။
ဒါကြောင့်ငွေကြေးလဲလှယ်ဖို့ကြိုးစားတာကကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဂျပန်မှာတော့လုံခြုံမှု၊ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အကြံပြုချက်က BINEMAX လဲလှယ်မှုမှာ LINE မှအခမဲ့ဖြန့်ဝေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် BITMAX သည်အလွန်အဆင်ပြေပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကို LINE app မှအသုံးပြုနိုင်ပြီး LINE Pay မှငွေသွင်းနိုင်သည်။
EIT (Etherium) BITMAX တွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်း
・ ETH (Etherium) ဝယ်ယူခြင်း
ငွေလဲလှယ်ရေးရုံးတွင် ETH ကို credit card ဖြင့် ၀ ယ်ပါ
* အချို့သောနိုင်ငံများတွင် Credit Card ၀ ယ်ယူခြင်းကိုကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။
・ ကျွန်ုပ်၏ Ether ပိုက်ဆံအိတ် (ကြေး ၅%)
အဆိုပါကြေးစျေးပေါဖြစ်ပြီးငါ ETH အထူးပြု။
angel Changelly (အခကြေးငွေ ၅% - ၁၀%)
ETH အပြင်သင် BTC ကဲ့သို့သော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အခြား crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနောင်တွင်ဝယ်လိုသူများအတွက်အကြံပြုနိုင်သည်။ သို့သော်အခကြေးငွေမြင့်မားသောကြောင့်နောင်တွင်စဉ်းစားပါကလဲလှယ်ရေးတွင်ကျွန်ုပ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခဲ့သည်။ ပိုကောင်းတဲ့အတွက်ဒုတိယအကြံပြုထားတယ်။
blockchain ဂိမ်းများတွင်အသုံးပြုသော ETH လိပ်စာများ
သင် ETH ဝယ်ယူပြီးသည်နှင့် blockchain ဂိမ်းတွင်အသုံးပြုသော ETH လိပ်စာသို့ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ ETH ကိုလဲလှယ်ရေးသို့မဟုတ်လဲလှယ်ရေးရုံးတွင်မည်သည့်နေရာတွင်ပို့ပြီး blockchain ဂိမ်းသို့ပို့မည်ကိုမသိလျှင်၊ ၎င်းကို blockchain ဂိမ်းတွင်အသုံးပြုသည့် app မှစစ်ဆေးနိုင်သည်။
·MyCryptoHeroes(MCH) app အတွက်
(အဆုံး) တရားဝင် Duel ဖလား 12 / 13 16: 00 စတင် !!
(အဆုံး) တရားဝင် Duel ဖလား 12 / 20 16: 00 စတင် !!
Trezor One / Model T Cryptocurrency ဟာ့ဒ်ဝဲပိုက်ဆံအိတ်
Ledger Nano X / S Cryptographic Asset Hardware Wallet
BlockFi လုံခြုံရေး၊ အတိုးနှုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုငွေချေးခြင်း